Izindlela Ezi-4 Zamasu Zokuthuthukisa Okuqukethwe Kwakho Okubonwayo ngo-2020 | Martech Zone
Izindlela Eziyi-4 Zamasu Zokuthuthukisa Okuqukethwe Kwakho Okubonwayo ngo-2020
NgoMsombuluko, Februwari 24, 2020 NgoMsombuluko, Februwari 24, 2020 Shane Barker
U-2018 wabona mayelana 80% yabathengisi sebenzisa okuqukethwe okubonakalayo kumasu abo ezokuxhumana nabantu. Ngokufanayo, ukusetshenziswa kwamavidiyo kukhule cishe ngama-57% phakathi kuka-2017 no-2018.
Manje sesingene enkathini lapho abasebenzisi bafuna okuqukethwe okukhangayo, futhi bakufuna ngokushesha. Ngaphezu kokwenza lokho kwenzeke, yingakho kufanele sebenzisa okuqukethwe okubukwayo:
Kulula ukwenza khumbula
Kuyajabulisa futhi kuhlanganyele
Kuyacaca-ke ukuthi udinga ukwandisa umdlalo wakho wokumaketha obukwayo. Ukukusiza ukuphuma, ngihlanganise amasu ambalwa ongawasebenzisa ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho okubukwayo ngo-2020.
Isu # 1: Bopha Amandla We-infographics
I-infographics yimifanekiso equkethe imininingwane eminingi ewusizo. Zikusiza ukwethula imininingwane yakho ngendlela ekhangayo nehehayo izethameli zakho.
Zisebenza njengemodi enhle yokuletha ulwazi ngefomethi efingqiwe kakhulu enezinto ezibukwayo. Ngemuva kwakho konke, uma unikezwa inketho, ungafunda amagama ayi-1000 wombhalo, noma udlule eshadini elifingqiwe elibonisa imininingwane efanayo?
Iningi labantu lingakhetha okokugcina.
Ngokusho kwamuva i-poll, 61% wabathengi bathe i-infographics iyindlela ephumelela kakhulu yokuqukethwe yokugcina ulwazi nokufunda.
Ukubukwa okunamandla nemidwebo esetshenziswe ku-infographics kuhamba ibanga elide ekugcineni abafundi benentshisekelo.
Ngakho-ke, kusobala ukuthi i-infographics iyindlela enamandla yokuqukethwe okubukwayo.
Kepha, uyenza kanjani eyakho ivelele phakathi kwezigidi zabanye ezigcwalisa i-inthanethi?
Nawa amanye amathiphu angasiza:
Qiniseka ukuthi ugxile. I-infographic efaka imininingwane eminingi ingadida umfundi.
I-infographics yakho ingenza kangcono kakhulu uma ungafaki yonke idatha ongayithola. Esikhundleni salokho, nciphisa ukugxila kwakho esihlokweni esisodwa bese uqinisekisa ukuthi wenza i-infographic ezungeze lokho.
Nasi isibonelo se-infographic emnandi futhi emfushane:
image nge Pinterest
Thola Usayizi Kwesokudla
I-infographics kufanele ibe nkulu kunezithombe nemidwebo ejwayelekile. Noma kunjalo, qiniseka ukuthi kunjalo ngosayizi ongalawuleka nobude. Uma lokhu kungagcinwa engqondweni, ungahle ulahlekelwe ngabafundi abangahle babe khona.
Dala i-Clutter-Free Graphics
Awufuni ukuletha i-infographic eminyene kakhulu. Njalo engeza izikhala ezizosiza abafundi ukuzulazula kulolu lwazi ngokushelela.
Ngokwengeziwe, qiniseka ukuthi nosayizi omncane kakhulu wefonti ku-infographic yakho kulula ukuyifunda.
Uma usuqedile ukudala i-infographic enhle, ungayithumela kumawebhusayithi ahlukahlukene ku-niche yakho. Lokhu kungakusiza ukuthi ufinyelele izithameli ezibanzi.
Isu # 2: Diliva okuqukethwe okwenziwe ngezifiso
Abathengi bafuna okuqukethwe okwenzelwe wena ngokwengeziwe kuzintshisekelo zabo. Empeleni, Amakhasimende angu-91% kungenzeka bathenge kusuka kumikhiqizo ebonayo futhi ibanikeze okunikezwayo okwenziwe ngokwezifiso neziphakamiso.
Enye Ucwaningo lwe-2018 iveze ukuthi uma okuqukethwe kungenziwanga ngezifiso, abathengi abangama-42% bayacasuka, futhi ama-29% abo angancipha amathuba okuthenga.
Enye indlela yokuthola ukuthi izethameli zakho zifunani ukulalela umphakathi. Bangu amathuluzi amaningi ngaphandle lapho okungakusiza wenze kanjalo. Bazokusiza ukuthi uhlole imizwa yabasebenzisi bakho futhi uthole ukuthi bacabangani ngawe nangabancintisana nabo.
Manje ake sibheke izindlela ezahlukahlukene lapho ungenza ngezifiso okuqukethwe kwakho.
Okwenzeka ngemuva kwesigcawu
Ukuthola ukuthi yini ekwakhiweni komkhiqizo kudala umuzwa wokusondelana ezingqondweni zezilaleli zakho. Ngokuthumela okuqukethwe okubukelwe ekusithekeni njengemifanekiso namavidiyo kuzinkundla zokuxhumana, unganika izethameli zakho ithuba lokungena ebhizinisini lakho.
Umthwebuli zithombe waseToronto, u-Anna, wenza lokho nje ngezinye zezinto azithumela ku-Instagram.
image nge Instagram
Ngaphezu kwalokho, izici ezinjenge-Instagram kanye ne-Facebook Stories nazo zingabonakala ziwusizo kulokhu.
Dala Okuqukethwe Kwasendaweni
Ukwenza okwasendaweni kokuqukethwe akugcini ekusebenziseni ulimi olukhulunywa endaweni. Ukusebenzisa izinkomba zendawo namacebo kokuqukethwe kwakho kungasiza abasebenzisi ukuxhuma ngokushesha.
Amasu okwenziwa kwendawo kaMcDonald's aziwa emhlabeni wonke. Abagcini nje ngokwenza lokhu ngokushintsha amamenyu abo, kodwa futhi nangokuqukethwe kwabo okubukwayo.
Isibonelo, abakwaMcDonald baheha amakhasimende ase-US ukuthi badle ukudla kwabo ngokwabelana ngokuqukethwe kwendawo. Muva nje babelane ngokuthunyelwe kuNational Cheeseburger Day ukuheha izethameli zabo ezivela e-US.
Esinye isibonelo ngesomkhankaso owenziwa nguMcDonald's ngesikhathi soNyaka Omusha waseChina ngo-2016. Njengoba lesi kuyisikhathi lapho abaningi behambela emakhaya beyobheka imindeni yabo, lo mkhankaso wagxila ekubalulekeni kokubumbana nesikhathi somndeni.
Ngamavidiyo nezithombe, kuveza uhlobo lwedoli elincane likaRonald McDonald ethatha uhambo olude egoduka.
image nge Yakha iDijithali
Kafushane nje, ngokwenza ngezifiso, okuqukethwe okubukwayo kungavusa imizwa enamandla, futhi kuhlanganyele nabasebenzisi.
Isu # 3 Faka amahlaya kokuqukethwe kwakho okubukwayo
Ukujova ukuhlekisa kokuqukethwe kwakho okubonakalayo kungaba nomthelela omkhulu ekutheni izithameli zakho zihlanganyela kanjani nebhizinisi lakho.
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokufeza lokhu ukuthi ngokusebenzisa ama-memes. Zifushane, ziyalandeka, futhi ziyahlekisa. Ngenye indlela, ungasebenzisa ama-GIF ahlekisayo namakhathuni noma imicu yamahlaya ukubandakanya izethameli zakho.
Ukubukwa okuhlekisayo akugcini ngokubandakanya izithameli zakho kepha kunganikeza ikhefu elidingeka kakhulu embhalweni.
Ukufaka okuqukethwe okuhlekisayo kokubonwayo kwakho akugcini ngokunikeza umkhiqizo wakho ubunikazi obuthandekayo, kodwa futhi kwehlisa namazinga okubuyisa.
Isibonelo, iRoyal Ontario Museum ihlala isebenzisa ama-meme ukubandakanya izethameli zayo ku-Instagram. Qaphela ukuthi bakusebenzise kanjani okwakamuva Inselelo kaDolly Parton ku-akhawunti yabo ye-Instagram.
image nge I-Instaigremu
Ngaphezu kwalokho, amahlaya akudingeki ukuthi ahlekise. Kungaba izithombe zezinja noma amavidiyo wezingane - noma yini eyenza izethameli zakho zimamatheke.
Noma mhlawumbe, okuqukethwe kwakho kungaba OKUHLE nokuhlekisayo. IBarkBox, insizakalo yokubhalisela imikhiqizo yenja, yenza isibonelo esihle. Ibonisa izithombe ezinhle zezinja futhi ingeza amahlaya kubo ngokufaka amagama-ncazo ahlekisayo.
Kodwa-ke, ngaphambi kokwamukela amahlaya, qinisekisa ukuthi kuyahambisana yini nezwi lomkhiqizo wakho nezwi lakho. Ngokwengeziwe, qiniseka ukuthi awusebenzisi amahlaya anomsindo, angalawuleki, noma angafanele. Lokho kungakhiqiza umkhiqizo wakho.
Isu # 4: Sebenzisa Amathuluzi Okuqukethwe Okubukwayo Angakwesokudla
Izitayela eziguqukayo njalo nezintshisekelo zomsebenzisi kungenza kube nzima ukuthola isu lakho lokuqukethwe okubukwayo. Kungakho kufanele ucabangele ukusebenzisa Amathuluzi lokho kungakusiza ukuthi udale ukubonwa kwe-stellar futhi ukhulise ukufinyelela kwabo ezinkundleni zokuxhumana.
Sebenzisa amathuluzi afana ne-Canva, i-Animaker, i-Google Charts, i-iMeme, nokuningi ukuze uqhamuke neziboniso ezimangalisayo
Uma usebenzisa amandla wokuqukethwe okubukwayo kahle, kungakusiza ukuthi ukhiqize ukubandakanyeka okukhulu. Kufanele ucabangele ukwenza okuqukethwe kwakho kube ngokwakho ukuze ukwenze kufanele izithameli zakho.
Ngokwengeziwe, kufanele ufake i-infographics isu lakho lokuqukethwe elibukwayo, uma ungakakwenzi lokho. Kuyasiza nokunika amahlaya ukwenza okuqukethwe kuhlanganyele kakhulu.
Okokugcina, sebenzisa amathuluzi wokudala okuqukethwe okubonakalayo ukukhulisa umdlalo wakho futhi wenze okuhle kokuqukethwe kwakho okubukwayo.
Ingabe akhona amanye amasu owasebenzisayo ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho okubukwayo? Sazise emazwaneni.
Tags: izibalo zokuqukethwe kwe-adobeindlelathuthukisa okuqukethwe komphakathiokuqukethwe okwenziwe kwaba okwasendaweniI-Marketing Infographicsmemesokuqukethwe okwenziwe ngezifisoizibalo zokuqukethwe ezibukwayo
Shane Barker ungumxhumanisi wokumaketha kwidijithali iminyaka eyi-15 ngokugcizelela ku-Influencer Marketing eminyakeni emihlanu edlule. Unguchwepheshe kwezentengiselwano, ukuqondiswa kwetrafikhi nokuguqulwa kwamawebhusayithi. Uxhumane nezinkampani zeFortune 5, Abathonya ngemikhiqizo yedijithali, kanye nosaziwayo abambalwa abaku-A.
I-Renderforest: Ukuhlelwa Kwevidiyo Yesikhathi Sangempela Nezifanekiso Zokugqwayiza Ku-inthanethi